I-Crowell 's Lane - Yabucala - 2 I-Bdrm - I-Airbnb
I-Crowell 's Lane - Yabucala - 2 I-Bdrm
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKelly
Indlu endala esandul 'ukulungiswa, etofotofo, ekwintsapho ethe cwaka kwiLobster Capital yaseKhanada. Indawo ekuyo indlu, ejikelezwe yiyadi neendawo ezinamahlathi, yenza kubekho izinto eziyimfihlo kwabo bafuna ukuba zodwa kwindawo yasekuhlaleni. Le ndlu ikufutshane ukusuka elunxwemeni olunentlabathi emhlophe, indawo ebalulekileyo yokudlala igalufa, kunye nendawo yokuthenga yasekuhlaleni.
Le ndlu inamagumbi okulala amabini kule ndlu enamagumbi okulala ayi-4, kodwa useza kuba nayo yonke indlu yakho. Kwiinyanga ezicocekileyo kuza kufumaneka kuphela umgangatho osezantsi oquka iKing kunye ne-double. Ngexesha lasehlotyeni nasekwindla kukho ukhetho lokusebenzisa amagumbi okulala amakhulu amabini phezulu. Le ndlu inamagumbi okulala amabini kuphela ngeli xesha lonyaka ngenxa yokuba iqula liphantsi ibe alizukuyixhasa indlu epheleleyo.
Le ndlu ikwintsapho encinci yokuloba kunxweme olusemazantsi e-NS. Yimizuzu emihlanu xa uhamba ngemoto usiya eBarrington Passage eyindawo yokuthenga yasekuhlaleni. Unxweme olusemazantsi eNova Scotia lunamalwandle amaninzi amahle amhlophe; iCrowell 's Lane ikumgama omfutshane ngemoto ukusuka ezininzi zazo. Kukho iindawo ezimbini zokudlala igalufa kwimizuzu eyi-20 xa uqhuba. IBlack Loyalist Heritage Centre kunye neVillage Historique Acadien ziimizuzu eyi-30 ukuya kweyi-40 xa uqhuba.
Zimbini iindawo zokungena kwi-Trans Canada Trail kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo. Nceda ucele indlela yokuya ukuba unomdla. Lo mzila usetyenziselwa ukuhamba, ukujoga, ukuhamba ngebhayisekile kunye neeATV.
Le ndlu ikumgama wemizuzu eyi-50 xa usuka kwisikhululo seenqanawa IKATI eYarmouth, iyure eyi-1.5 xa usuka e-Digby-St. John ferry, kunye neeyure eziyi-3 xa usuka kwisikhululo seenqwelo-moya i-St.
Umbuki zindwendwe ngu- Kelly
Inombolo yomthetho: RYA-2021-07190809508092479-90
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barrington